JW Library သုံးပြီး ဖတ်ရှုလေ့လာတဲ့အခါ ပိုအဆင်ပြေစေဖို့ အသွင်အပြင်တချို့ကို ပြင်ဆင်ပေးထားပါတယ်။ အခန်းတစ်ခု၊ ဆောင်းပါးတစ်ခုကို သင်ဖတ်ရှုနေတဲ့အခါ မျက်နှာပြင်ထိပ်မှာရှိတဲ့ app bar မှာ ဒီလုပ်ဆောင်ချက်တွေကို တွေ့နိုင်ပါတယ်။
လုပ်ဆောင်ချက်တချို့ကို ရနိုင်ဖို့ app bar မှာရှိတဲ့ More ခလုတ်ကို နှိပ်ပါ။
ဖတ်ရှုရာမှာ ထပ်ရွေးချယ်နိုင်ဖို့ အောက်ပါ လမ်းညွှန်ချက်တွေအတိုင်း လုပ်ဆောင်ပါ–
ပုံအနေအထားနဲ့ ဒါမှမဟုတ် စာသားအနေနဲ့ ကြည့်မယ်
. . . မှာ ဖွင့်မယ်
အခုဖတ်နေတဲ့ အခန်း ဒါမှမဟုတ် ဆောင်းပါးကို ဘာသာစကားပြောင်းပြီး ကြည့်နိုင်ပါတယ်။
အခုဖတ်နေတဲ့ အခန်း ဒါမှမဟုတ် ဆောင်းပါး ရရှိနိုင်တဲ့ ဘာသာစကားအားလုံးကို ကြည့်ဖို့ ဘာသာစကားများ ခလုတ်ကို နှိပ်ပါ။ သင်အသုံးများတဲ့ ဘာသာစကားတွေကို စာရင်းအပေါ်ဆုံးမှာ တွေ့နိုင်ပါတယ်။ ရိုးရှင်းတဲ့ ကင်းမျှော်စင်စာစောင်တွေကိုလည်း တွေ့နိုင်ပါတယ်။ ဘာသာစကားနာမည် ရိုက်ထည့်ပြီးလည်း ရှာနိုင်ပါတယ်။
မကူးယူရသေးတဲ့ ဘာသာစကားတွေကို တိမ်ပုံ အမှတ်အသားနဲ့ ဖော်ပြထားပါတယ်။ စာပေကို ကူးယူဖို့ ဘာသာစကားတစ်ခုကို နှိပ်ပါ။ စာပေကို သင့်ရဲ့ဖုန်း၊ တက်ဘလက်ထဲ ကူးယူပြီးသွားပြီဆိုရင် တိမ်ပုံအမှတ်အသား ပျောက်သွားပါလိမ့်မယ်။ ကူးယူထားတဲ့ စာပေကိုဖတ်ချင်ရင် အဲဒီဘာသာစကားကို ပြန်နှိပ်ပါ။
ဖတ်ရှုရတာ အဆင်ပြေစေဖို့ စကားလုံး အရွယ်အစားကို ချိန်ညှိနိုင်ပါတယ်။
စာသားချိန်ညှိရန် ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။ စာသား အကြီးအသေး ချိန်ညှိနိုင်တဲ့ ဘားတန်းမှာ အတိုးအလျှော့ ဆွဲပါ။ ဒီ app မှာပါတဲ့ ဘယ်စာပေကိုပဲဖတ်ဖတ် အခုအတည်ယူလိုက်တဲ့ စကားလုံး အရွယ်အစားအတိုင်း ဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်။
တချို့ဆောင်းပါးတွေကို ပုံအနေအထားနဲ့ ဒါမှမဟုတ် စာသားအနေနဲ့ ကြည့်နိုင်ပါတယ်။ ခလုတ်နှိပ်ပြီး ကြည့်လိုတဲ့ အနေအထား ပြောင်းနိုင်ပါတယ်။
ပုံအနေအထားနဲ့ ကြည့်မယ်– ပုံအနေအထားနဲ့ ကြည့်မယ်ကို ရွေးချယ်တယ်ဆိုရင် စာရွက်နဲ့ ပရင့်ထုတ်တဲ့အခါ ပေါ်တဲ့ ပုံစံမျိုးနဲ့ တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ သီချင်းစာအုပ်လိုမျိုး စာပေတွေကို ပုံအနေအထားနဲ့ ကြည့်မယ်ဆိုရင် ဂီတသင်္ကေတတွေကို ဖော်ပြပေးထားတဲ့အတွက် တချို့သူတွေ ဒါကို ပိုနှစ်သက်ကြပါလိမ့်မယ်။
စာသားအနေနဲ့ ကြည့်မယ်– စာသားအနေနဲ့ ကြည့်မယ်ကို ရွေးမယ်ဆိုရင် ညွှန်းထားတဲ့ကျမ်းချက်တွေကို ရှာဖွေနိုင်သလို သင်ရွေးထားတဲ့ စာလုံးအရွယ်အစားနဲ့ တွေ့ရမှာဖြစ်တယ်။
. . . မှာ ဖွင့်မယ် (Open in . . .) အသွင်အပြင်က JW Library မှာ ကြည့်နေတဲ့ အကြောင်းအရာကို တခြား apps မှာကြည့်နိုင်ပါတယ်။
ရွေးချယ်စရာ စာရင်းတွေ တွေ့နိုင်အောင် . . . မှာ ဖွင့်မယ် ခလုတ်ကို နှိပ်ပါ။ ဥပမာ၊ အွန်လိုင်း စာကြည့်တိုက်မှာ ဖွင့်မယ် ခလုတ်ကို နှိပ်မယ်ဆိုရင် သင် အခုဖတ်နေတဲ့စာမျက်နှာကို ကင်းမျှော်စင် အွန်လိုင်း စာကြည့်တိုက်မှာ ဖွင့်ပေးပါလိမ့်မယ်။
စာပေတစ်ခုမှာ ညွှန်းထားတဲ့ ကျမ်းချက်ကို နှိပ်တဲ့အခါ အဲဒီကျမ်းချက် ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။ ကျမ်းချက်အောက်မှာပါတဲ့ ထပ်ရွေးချယ်စရာများ (Customize) ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။ သင် ကူးယူထားတဲ့ ကျမ်းစာတွေကို တွေ့ရမှာဖြစ်ပြီး စာရင်းမှာ ပေါ်စေချင်တဲ့ ကျမ်းစာကို ရွေးပါ။
ဘာသာပြန်ကျမ်းစာတွေကို စာရင်းထဲထည့်ချင်တယ်၊ ထုတ်ချင်တယ်ဆိုရင် Add ဒါမှမဟုတ် Remove ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။ ကျမ်းစာကို ဆွဲတင်၊ ဆွဲချပြီး စာရင်းကို သင်လိုချင်တဲ့ အစဉ်လိုက် စီနိုင်ပါတယ်။
JW Library မှာ နောက်ထပ်ကျမ်းစာတွေ ထည့်နိုင်ပုံကို သိချင်တယ်ဆိုရင် “ကျမ်းစာတွေကို ကူးယူ၊ စီစဉ်နိုင်ရာများ— Android” ကိုကြည့်ပါ။
အဲဒီအသွင်အပြင်တွေပါတဲ့ JW Library 1.4 ကို ၂၀၁၅၊ ဖေဖော်ဝါရီလမှာ တင်ထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။ Android 2.3 နဲ့ အဲဒီနောက်ပိုင်း အသစ်ထုတ်တဲ့ ဖုန်း၊ တက်ဘလက်တွေမှာ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ အဲဒီအသွင်အပြင်တွေကို မရဘူးဆိုရင် “JW Library ကို စတင်အသုံးပြုခြင်း—Android” ဆောင်းပါးထဲက “နောက်ဆုံးထုတ် အသွင်အပြင်များ ရယူပါ” ခေါင်းစဉ်ငယ်အောက်မှာပါတဲ့ ညွှန်ကြားချက်တွေအတိုင်း လုပ်ဆောင်ပါ။